Andrianainarivelo Hajo : « Tsy mihaino ny mpitondra… » | NewsMada
Andrianainarivelo Hajo : « Tsy mihaino ny mpitondra… »
« Tsy hita taratra amin’ny asan’ny mpitondra ny hetahetan’ny vahoaka. Tsy misy ny fakan-kevitra amin’ny vahoaka, tsy mihaino ny vahoaka miteny sy mitaraina koa ny mpitondra. Antony mampisy olana amin’ny vahoaka, tompon’ny fahefana sy ny mpitondra tokony hanatanteraka ny asany izany. Sarotra ny fampandrosoana raha tsy mipetraka ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka », hoy ny filoha nasionalin’ny antoko malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, afakomaly, nitondra famelabelarana, tao Fianarantsoa. Nambarany fa mandeha an-jambany ny mpitondra ary atao andrana avokoa ny asa. Misy ihany ny soso-kevitra sy tetikady avy amin’ny antoko politika sy firaisamonim-pirenena saingy, tsy mihaino ny mpitondra fa mihevi-tena hahavita irery.
Nohitsiny koa fa ilaina ny fahafaha-maneho hevitra ary manana adidy manao ny tamberin’andraikitra amin’ny vahoaka ny mpitondra . « Tokony hangaraharaha ny fitantanam-bola mba hisian’ny fifampatokisana », hoy ihany izy. Mbola mitaky ny hamerenana ny vahoaka hisafidy ny mpitondra atokisany ny antokony rehefa tsy manatanteraka ny asany ny mpitondra. Ilaina ny fitadiavana vahaolana maharitra amin’ny alalan’ny fifidianana. « Roa taona sy tapany aty aoriana, tsy mbola hita soritra mazava ny fandaharanasan’ny mpitondra », hoy Andrianainarivelo Hajo.
Nanteriny fa miharatsy ny toe-draharaha. Tsy misy fahamarinan-toerana ara-politika, tsy miakatra ny toekarena, tsy misy filaminana ara-tsosisaly. Vaha-olana tokana no andrasan’ny be sy ny maro manoloana izany. « Ilaina ny fanetren-tenan’ny filoham-pirenena hametra-pialana hahafahana manatanteraka fifidianana mialohan’ny fotoana », hoy izy.